Ajajaan duraanii WBO zoonii Lixaa Laggasaa Wagiin eenyu ture? - BBC News Afaan Oromoo
Ajajaan duraanii WBO zoonii Lixaa Laggasaa Wagii waggoota 11 dura Adoolessa bara 2008 duula waraanni mootummaa taasise hordofuun harka qonnaan bulaa tokkootti ajjeefame, akka ragaaleen miidiyaa mootummaa himutti.
Tibbana immoo dhimmi Ministirri Muummee Itoophiyaa lubbuu isaa oolchuuf yaalii taasisanii akka turan dubbataniin ijoo dubbii ta'eera.
Laggasaan bara 2004 kora sabaa ABO kan sadaffaa irratti miseensa Gumii Sabaa ta'ee akka filame qondaaltonni dhaabichaa BBC'tti himaniiru.
MM Abiy Laggasaa lubbuun oolchuuf yaaluu isaanii dhaabni amane
Yeroo ammaa maatiin isaa qabsoof jecha dhiisee deeme biyya Awuroppaa tokko keessa akka jiran BBC'n odeeffateera.
Garuu, waa'ee Laggasaa Wagii maal beekna? Seenaa isaa dhaaba ABO, qondaaltota dhaabichaa, akkasumas namoota dhihootti isa beekan irraa walitti fiduun isiniif qopheessineerra.
Bakki dhaloota Laggasaa Wagii bakka ajajaa waraanaa tahe itti hojjetaa turerraa fagoodha.
Akka odeeffannoo dhaaba ABO irraa argameen taanaan Laggasaan bara 1960 abbaa isaa Obbo Wagii Meettaafi harmee isaa Aadde Buzunash Ayyaanaa irraa dhalate.
Bakki dhalootaas Godina Shawaa Lixaa, Aanaa Shinoo ganda Kuyyuu Giccii jedhamtu keessatti.
Seenaan isaa akka eerutti barnoota sadarkaa duraa naannoo bakka dhalateetti baratus kutaa 10 -11 garuu magaalaa Finfinneetti barate.
Namoonni maaliif MM Abiyyiin Abbichuu jedhun?
Ta'us, sababa ifatti hin ibsamneen, barnoota kutaa 11'tti addaan kutuun walakkeessa bara 1975 keessa barnoota makaanikummaa barachuun hojii hojjechuu eegale.
Boodarras gara magaalaa Dirree Dhawaa imaluun waggoota muraasaaf hojii daldalaa irratti bobba'un jiraachaa ture.
Obbo Laggasaan Bara 1987 Aadde Wayinisheet Getaahun jedhamtu waliin bultii ijaarratee ijoollee durbaa sadii godhachuu isaa seenaan isaa hima.
Egaa ergasii bara 1990 keessa maatii dhiisee qabsoo waraanaa Lixa Oromiyaa ABO jalatti gaggeeffamutti makame.
Bara kana irraa eegales miseensummaa, dabballee dhaabaa, qondaala waraanaa akkasumas ajajaa waraanaa hanga ta'utti gaheera.
Yeroo mootummaan Dargii kufu Laggasaa Wagiin dabballee dhaaba ABO ture. Boodarra ABO'n chaartarii yeroo seenu Aanaa Qaaqee bulchaa ture jechuun seenaan isaa dhaabicharraa arganne ibsa.
Erga ABO'n chaartara keessaa bahee booda garuu Laggasaan dur daldalaan jiraachaa ture qabsoo waraanaa seenuu seenaan isaa ni hima.
''Falmaa diinaa wajjin godhamuu hanga walakkeessa bara 1993 itti fufuun of ijaaruuf humna daangaa Sudaanii fi Itophiyatti bahee waliin ture,'' jedha seenaan isaa.
''Yeroo inni karaa Lixaa ture ani karaa Baha gama Harargeetin ture. Seenaadhaan jaallan kiyyarraan beeka,'' jedhu miseensi Gumii Sabaa ABO Obbo Mikaa'el Booran.
Boodarra bara 1994 humna ABO ijaaramee qabsoof Lixa Oromiyaatti deebi'ee keessaa tokko Laggasaa ture.
Senaan isaa akka himutti walitti bu'insa darbee darbees wal waraansa waraana mootummaa gidduutti gama Lixa biyyattii gaggeeffame keessatti maqaan isaa irra - deddeebbiin ni ka'a.
''Bara 1998 keessa miseensota ABO leenjii addaaf biyya ollaatti ergaman keessaa ture,'' kan jedhame Laggasaan yeroo kana gaheen inni waraana keesatti qabu guddataa dhufuutu himama.
Bara 1998/99 'itti aanaa moonaa leenjii WBO waliigala tahe' kan hojjetaa ture Laggasaan bara 2000 irraa kaase leenjii erga fudhatee booda ajajaa WBO Zoonii Lixaa jalatti ajajaa damee bobbaafi qunnamtii ta'uutu himama.
Boodarra, guyyaa ajajaan WBO Zoonii Lixaa Irreessaa Caalaa erga ajjeefame booda bakka isaa bu'un ajajaa ta'un hanga ajjeefamuutti hojjetaa turuu seenaan isaanii eera.
Yeroo Irreessaa Caalaan ajjeefame garuu hin ibsamne.
Miseensi Gumii Shanee ABO Obbo Mikaa'el Booran akka jedhanitti ''Lola Itoophiyaafi Ertiraa booda bara 2002 irraa kaase hanga bara 2008'tti isumatu gaafatamaa ture,'' jechuun himu.
Ajajaan waraanaa Laggasaa Wagii duula waraanni mootummaa taasiseen Adoolessa bara 2008 harka qonnaan bulaatti akka ajjeefame dokimantariin miidiyaan biyyaalessaa biyyattii yeroos hojjete agarsiisa.
Wanti dokimantarii keessa tureefi akkaataan ajjeechaa nuti miseensota achi turanirraa walitti qabne tokkodha jechuun qondaalli ABO Obbo Mikaa'el BBC'tti himaniiru.
''Laggasaan lola garaa garaa booda qofaa isaa hafee dhukkubsate mana namaa seenee, '' kan jedhan Obbo Mikaa'el, isa dokimantarii irratti ummata ijibbaateen ajjeefame jedhamu garuu hin fudhatani.
Durumaa akka loltoota kaanirraa adda bahu kan isa taasisees lola yeroo adda addaa irratti taasifameeni.
Ibsa dhaabi ABO Jimaata dheengaddaa baasen erga Obbo Daawud Ibsaa odeeffannoo MM Abiy Ahimad (yeroos hojjetaa dhaabbata 'INSA') irraa argatan Laggasaa bira gahuu isaanii himanis inni murtii biraa fudhate.
''...loltoota ajaja isaa jala jiran kan bakkoota adda addaatti bobbaasee jiru marfama diinaa keessatti, naannichas diinaaf dhiisee bakka sana kan gadi hin lakkisne tahuu isaa beeksisuudhaan murtii fudhate,'' jedha ibsichi.
Kana booda osoo hin turin Laggasaa Wagiin ajjeefame.
'Nama lolee lolchiisu ture'
Laggasaa Wagiin keessumaa dhaloota ammaa biratti haalaan ni beekama. Keessumaa namoonni seenaa isaa beekna jedhan waraanaan akka cimaa ta'e dubbatu.
''Jaal Laggasaa Wagiin nama waraanaa cimaa ture. Nama lolee loolchisu ture,'' jedhu Obbo Mikaa'el Booran.
''Jaallan isaafi ummata isaa biratti qofa osoo hin taane diina birattillee guddoo beekame rakkina guddaa diinatti uumaa kan ture.''
Waloon US beekamtuun waardiyyaan ‘shakkamtuu fakkaatta' naan jedhe jettee himatte
Waa'ee Appiiwwan ulfa ittisuuf gargaaran-Natural Cyles fi Clue- hagam beekna?
Gaazexeessaan BBC’f oduu dubbisu maaliif maqaa isaa jijjiire?